पूर्वएमालेमा कित्ताबन्दी : सदाचारीहरु नेपालतिर, विवादितहरु ओलीतिर
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १९:४०
काठमाडौं। गत असार १० गतेबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक एकपछि अर्को विवादको भूमरिमा रुमलिएको छ। विवाद बढ्दै जाँदा नेकपाका नेताहरुले आफ्नो ‘पोजिसन’ क्लियर गर्न थालेका छन्।
नेकपाको अहिलेको विवादमा पूर्वएमाले प्रष्ट दुई धारमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको कित्ताबन्दी यतिबेला उत्कर्षमा छ। नेकपाको ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा नेताहरुको टाउको गन्न थालिएको छ।
स्थायी समितिमा रहेका माधव समूहका अधिकांश नेता इमान्दार र स्वच्छ छविका मानिन्छन्। तर, ओलीनिकटका अधिकांश नेताहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी उनी पक्षीय नेताहरु भ्रष्टाचार र कमिसन काण्डमा जोडिएर बद्नामित भएको भन्दै कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन्।
पूर्वएमाले समूहमा नेता नेपाल सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने नेतामा मानिन्छन्। १४ वर्षसम्म नेकपा (एमाले) को महासचिव हुँदा उनी राजनीतिक कारणबाहेक आर्थिक र नैतिक कारणले विवादमा तानिएनन्। उनी पक्षका नेताहरु पनि धेरथोर नैतिकताप्रति सचेत देखिन्छन्।
तर, प्रधानमन्त्रीनिकट मानिने नेताहरु सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न र पार्टीभित्र सत्ताको डण्डा बर्साउन माहिर मानिने गरेका छन्। उनीहरुका गतिविधिले नेकपा नै बद्नामित हुँदै गएको छ। ती सबै घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीको विचित्रको अनुराग देखिन्छ, जसले अभियुक्तको मनोबल बढ्ने गरेको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका ओलीका प्रिय पात्र विष्णु पौडेललाई सुनपानीले चोख्याइएको छ। उनी सरकारी जग्गा हडप्ने मूख्य नेतृत्व थिए। तर, उनलाई चोख्याइएपछि मात्र अरुमाथि मुद्दा चलाइयो। ललिता निवास प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदार जति दोषी छन्, विष्णु पौडेल त्यस्ताभन्दा कम्ति दोषी छैनन्। ओली सरकारले चन्द्रदेवी जोशीजस्ता निष्कलंकित नेतालाई फसाएर विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको छ। अहिले नेकपा फुटाउन तिनै पौडेल कम्मर कसेर लागेका छन्।
ओलीका प्रियपात्र मानिएका गोकूल बाँस्कोटा सेक्युरिटी मेसिन खरिद प्रकरणमा घुसकाण्डमा तानिए। उनले ७० करोड कमिसन थोरै भएको र एक अर्बभन्दा कममा ठेक्का दिन नसकिने भन्न्दै गरेको बार्गेनिङ सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भयो। चौतर्फी दवावपछि उनले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा त दिए। तर, छानविन हुन नपाउँदै ओलीले उनलाई निर्दोष भएको घोषणा गरे। ओलीको घोषणाले प्रधानमन्त्री स्वयंको निर्देशनमा बाँस्कोटाले कमिसनको बार्गेनिङ गरेका थिए भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। अहिले बाँस्कोटा ओलीको घर कुरेर बसेका छन् र ओली निवासबाट दिनमा नेकपालाई दर्जनजति गाली गर्छन्।
ओलीका अर्का दाहिने हात मानिएका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल पनि भ्रष्टाचार काण्डमा तानिए। मेडिकल उपकरण खरिद प्रकरणमा कमिसनको चाँजोपाँचो मिलाउने उनै पोख्रेल थिए। पोखरेलको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चीनले अनुदानमा दिने मेडिकल उपकरण नल्याएर महंगो मूल्यमा मेडिकल सामान ल्याइयो, जुन मेडिकल उपकरणले कोरोना परीक्षणमा खास काम गर्न सकेन। त्यसो त स्वतः गृह मन्त्रालयको नेतृत्व हुनुपर्ने कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति त्यही कमिसनकै चक्करका कारण ओलीले रक्षामन्त्री पोख्रेललाई थमाएका थिए।
ओलीका अर्का आज्ञाकारी विश्वासपात्र भानुभक्त ढकाल पनि भ्रष्टाचार काण्डबाट अलग रहन सकेनन्। मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा ढकाल नै विभागीय मन्त्री थिए। ढकाल आफैमा भ्रष्ट चरित्रका नेता नभएको तर प्रधानमन्त्री ओलीको आज्ञा तोड्न नसक्दा बदनाम भएको भन्नेहरु पनि छन्। तथ्य जेसुकै होला। तर, उनी पनि ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोगमा जोडिए। तर, यथार्थ हो कि ढकाल एक्लै त्यो स्तरको कमिसनको चक्करमा पर्ने र आँट गर्ने खालका नेता थिएनन्। यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन छ, आफ्नै निर्देशनमा प्रक्रियाबाहिर गएर सामान किनिएको स्वयं ओलीले स्वीकारेका छन्, यद्यपि यसलाई उनले असामान्य परिस्थितिमा गरिएको निर्णय भन्दै बचाउ गरेका थिए।
ओलीका अर्का विश्वासपात्र मानिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि एमसीसी प्रकरणका कारण विवादमा तानिए। व्यक्तिगत दृष्टिले सदाचारी मानिने मन्त्री ज्ञवाली देशकै अस्मिता धरापमा पर्ने सम्झौता अनुमोदन गर्न किन लालयित भए ? त्यो चाहिँ भविष्यले बताउला। तर, एमसीसी सम्झौता पारित गराउन उनले गरेको प्रयास देशका लागि निकै घातक रह्यो। यद्यपि, सभामूख अग्निप्रसाद सापकोटाको सुझबुझपूर्ण निर्णयले एमसीसीको राष्ट्रघात तत्कालका लागि टरेको छ।
ओलीका अर्का प्रियपात्र पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतलाई सांसद अपहरणको अभियोग लाग्यो। ओली सरकार बचाउन उनले संघीय समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई ‘कर्नर’मा पारेर काठमाडौं ल्याएपछि उनी विवादमा तानिए। यसअघि पनि बस्नेत पटकपटक विवादमा तानिँदै आएका थिए। सांसदलाई बर्दिबासबाट उठाएर ल्याउने बस्नेतको शैली साउथ इण्डियन मुभीजस्तै थियो। यसले ओली सरकारलाई थप बद्नामित बनायो।
स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा मात्र होइन, पार्टीका तल्ला कमिटीसम्म पूर्वएमालेमा संस्कार र प्रवृत्तिगत कित्ताबन्दी छ। तुलनात्मक रुपमा सबै तहमा नेपालका मान्छेहरु इमान्दार र राजनीतिक चरित्रका देखिन्छन् भने ओली समूहका नेताहरु गैरराजनीतिक चरित्र र अश्लिल गालीगलौजमा भरपर्ने गरेका नेकपाका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको गुनासो छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, निगम अझै घाटामा छ : प्रवक्ता उपाध्याय
थप १८६ जनामा कोरोना पुष्टि, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
बल ओलीकाे काेर्टमा : प्रधानमन्त्री नछाेड्दा अध्यक्ष पद पनि गुम्नेछ
विराटनगरमा थप पाँच पत्रकारलाई कोरोना
कांग्रेस पुनर्जागरणका लागि वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा ७ बुँदे प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुपान्तरण गर्न सकिएन : नारायणकाजी श्रेष्ठ